Posted by တန်ခူး at 10:55 AM
“အလှကိုယ်စီ ရှိကြသည်” လို့ နားလည်ထားတဲ့ စွယ်တော်ဟာ လောကကို အလှဆင်ကြတဲ့ ပန်းတွေ အလယ်မှာ သူလဲလေ ပန်းတစ်ပွင့် ဖြစ်ခွင့်ရလို အားရကျေနပ်စွာ...
KK SNH said...
Good to Read to Remember Old-SchoolDays, Freedom, Youth & Friends, Love & Freshness of Soft-Romantic Mind..!!!
Anyway, It's Gone and Struggling @ Ongoing- practical Life is Not That Bad also...?
အတွေး စိတ်ကူးလေး ကောင်းသလို ရေးထားတာလဲ ကောင်းလိုက်တာ...။
တကယ်ပါ... အရမ်းကို ကောင်းတာပါဘဲ...။ ပန်းမဆန်စွာ အကြမ်းခံသည့် ပန်းပွင့်ချင်း အတူတူမို့ 
အားလုံးကို တန်ခူးနဲ့တထပ်တည်း ခံစားလို့ ရတယ်..
သက်ဝေကတော့ အားလုံးထဲမှာ နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ပြည်ကို Short Trip လေး (လေ့လာရေးခရီး) သွားခဲ့ရတာကို အလွမ်းဆုံးပါဘဲ...။
အဲဒီအကြောင်းလေးကိုလဲ ရေးအုံးမယ်လို့တွေးထားတယ်။
ကျောင်းသားဘ၀ကိုလွမ်းသွားပါတယ်။ တကယ့်ကို လွမ်းမောဖွယ်ရာ တက္ကသိုလ်နွေညများပါပဲ။
အရမ်းလွမ်းတယ်... သိပ်တော့မဆင်လှပေမဲ့ လွမ်းတယ်...
ဟီးးးး အနော်တို့လက်ထက်က စပီး လှလာကြတယ်လေ...
လသာ၂ က ဆူးဆလပ်တွေ အများကြီးရယ်...။
ဆဋ္ဌမ နှစ်မှာမှ မနူးညံ့လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ ဒီနှစ်မှာ မှ မနူးညံ့ရင်လည်း အပျိုကြီးဖြစ်ဖို့က ၇၀ % လေ။ :)
မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူ စာအုပ်ကို အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တအုပ်အနေနဲ့ အမြဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူဘ၀ကို အာအိုင်တီမှာ မရရှိခဲ့ပေမယ့် ၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် ပုံစံချင်းတော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ။ အာအိုင်တီရဲ့ ၆နှစ်ဘ၀ကိုဖတ်ပြီး ပြုံးလိုက်မိတယ် ။
မတန်ခူးရေ.. YIT ကျောင်းအကြောင်းရေးထားတာ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက YIT ကို သွားမလည်ဖြစ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တချို့က YIT ၀င်ခွင့်ရသွားတယ်။ ၉၂ အောင်တွေလေ။ ဒါပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရှိတာ ၁၀ တန်းမဖြေခင်ကတည်းပဲ။ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးတော့ YIT ကျောင်းသူမဟုတ်ပေမယ့် တက်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းကိုတောင် လွမ်းသွားပြီ။ (ဘာမှလည်း ဆိုင်ဘူးနော်.. အဟီး.. :D ) မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူတော့ဖတ်ချင်တယ်.. မတန်ခူးဆီမှာရှိရင် ရှယ်ပေးပါနော.်. :)
I appreciate RIT only for cheap tuition and the calibre of friends (that brought peer competition). I appreciate some professors who are benevolent enough to constantly update the syallbus, curriculum, facilities and texts, laboratories and technologies. But I still recountabad experience which I had with the RIT blocks hostel cafe near the main entrance. I wanted to watch CNN but morons there told me that news are not allowed to watch because dick head registerar Thein Sein ordered so. Whatashame. So to be honest, if you remove the high calibre and competitive students andafew comitted students, YIT is nothing but an empty shell, outdated syallbus in some aspects, shoddy lecture halls, substandard lab equipment. Inanut shell, it is an engineering college inathird world country. Its graduates do perform because they were good before they come to YIT, but its graduates may not perform well if such constant supply of outstanding students choose to get college education elsewhere (or if they were offered by overseas institutions). I simply wished the officials and educators at my alma mator will change its complacency and will try hard to educate as the calibre of the intake may be lower than bad old days of mine.
"So to be honest, if you remove the high calibre and competitive students andafew comitted professors"
sis lay..RIT-ian pop!
hee.thanks for writing uni life in mm..!
တန်ခူးက ကျောင်းသူဘ၀ကို ပြန်တမ်းတတော့ ကျနော်ကလည်း ကျောင်းကြီးကို ပြန်လွမ်းမိတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်က ကျောင်းကို တခေါက်ပြန်ရောက်သွားတော့ မဒမ်ပေါ ကွန်ပြူတာခန်းထဲ ၀င်နေတုန်း၊ ကျနော်တယောက်တည်း အခန်းရှေ့က ကော်ရစ်ဒါမှာ ရပ်ပြီး ကျောင်းကြီးကို မျက်စိတဆုံး မြင်ရသလောက် ငေးမောကြည့်ရှုနေမိတယ်။ ခဏနေတော့ (ကျောင်းသားဘ၀မှာ အင်မတန်စာတော်တဲ့၊ စာအသင်အပြကောင်းတဲ့) ကျနော်တို့ရဲ့ ဆရာက ကွန်ပြူတာခန်းထဲက ထွက်လာပြီ့း ကျနော့်ဘေးမှာ အသာလာရပ်တယ်။
ဆရာက ပင်မအဆောက်အဦကြီးရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ်က လေးထောင့် အုတ်အဆောက်အဦးငယ်လေးတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး “ကြည့်စမ်းပါဦးကွာ။ ငါတို့ ကျောင်းကြီးက တကယ်တော့ တော်တော်ကို လှတာပါ….” လို့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ပြောရှာတယ်။ သူညွှန်ပြရာကို မျက်လုံးက လိုက်လံကြည့်ရှုရင်း ကျနော် ဆရာကို ဘာစကားမှ ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူ့ခံစားချက်ကို ကျနော် နားလည်သလို ကျနော့်ခံစားချက်ကိုလည်း ဆရာနားလည်မှာဘဲ။ ကျနော်တို့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ ခံစားချက်က အတူတူဘဲ။ အဲဒီမှာ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ဘဲ အတွေးကိုယ်စီနဲ့ ငြိမ်သက်နေမိခဲ့ကြတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်…..တန်ခူးရယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းကြီးက တော်တော်ကို လှခဲ့တာပါ…..။
ကျွန်တော်တော့ နှစ်လနီးပါးပဲ တက်လိုက်ရတယ်။ အမ်အိုင်တီကို ရောက်သွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ကစပြီး နောက်ဆုံးအသုတ်အထိ ဒုတိယနှစ်အပြီးမှာ မေဂျာကို အမှတ်နဲ့ မခွဲတော့ဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ယူလို့ ရတယ်။ စာလည်း သိပ်ဖတ်ဖို့ မလိုတော့ဘူး။ စာမေးပွဲကျရင် ဆပ်ပလီရှိတယ်။ စာသိပ်မကြိုးစားရပေမယ့် ပျော်စရာလည်းမကောင်းဘူး။ စိတ်ညစ်ဖို့ ပဲကောင်းတယ်။
ကဗျာသမား စာသမားတွေက ဘာလို့ကြေကွဲနေတာများလဲမသိဘူးနော်..
R.I.T. က သူငယ်ချင်းမ တွေပြောတာတော့ ခြေလှမ်းမပျက်။ မရယ်မပြုံး။ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလဲ မဖြစ်။ RITကျောင်းသူအစစ် လိုဟန်ဆောင်နေတာဆိုတာ.. တစ်ကယ်တော့ ဒူးတုန်နေတာများတယ်တဲ့… ဟုတ်လားဟင်.. မ :P
ဟုတ်တယ်နော်… ငယ်ငယ်တုန်းက ကုန်ကြမ်းပိုပေါတယ်..
ဘီလူးကျွန်းက မိန်းကလေးတွေ က တစိမ့်စိမ့်ကြည့်လေ ပိုလှလေပါ….
ကျောင်းတွေပိတ်ချိန် ညနေစောင်းတွေမှာ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေတဲ့၊ နှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်လောက်ပဲ ဖွင့်တတ်တဲ့ ကင်တင်းတွေမှာ မိသားစုနဲ့ ညနေစာ စားခဲ့တဲ့ နေ့တွေကို လွမ်းတယ်..။
“နွေးအေး” ကို လွမ်းတယ်…
နွေးထွေး လှပတဲ့ ခင်မင်မှုအတွက်ရယ်...
Link ကလေး အတွက်ရယ်... ကျေးဇူးအထူး ဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။
Haveanice Weekend with FAMILY...!!!
RIT, YIT , YTU the name was changed.....
But the spirits are the same...
RIT never die...............
RIT never die.
I miss ...miss...
anyway, ama yay.. thanks for ur link.
I cannot type Myanmar font now.
I bought new computer.
အစ်မရေ့ နှစ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ရဲရင့်လာတဲ့ အာအိုင်တီ ကျောင်းသူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ အာအိုင်တီတော့မဟုတ်ပေမယ့် T , Drawing paper တွေ နဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးတော့ ခံစားလို့ ရတယ် ကျောင်းသားအနေနဲ့ နော့် ။ အခုတော့လည်း ကျောင်းကြီးကိုလေ ကျနော် လွမ်းတယ် သူငယ်ချင်းများကို ကျနော် လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကလို အားလုံးက လွမ်းစရာအဖြစ်ကျန်ခဲ့တာပါပဲ ။
နွေအေး မေတ္တာပေါင်းကူးကို လွမ်းမိတယ်။
ဘ၀မှာ အမှတ်တရနေ့စွဲလေးတွေ အနေနဲ့ အမြဲအမှတ်ရနေမယ့်....
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RIT >> YIT>> YTU...
ဒါပဲလေ... RIT ဆိုတာ
အမဆီမယ် ကော်မန့်တွေ အများကြီးတော့ ...
အမရေ.. link လို့ကျေးဇူးပါ
‘မ’ရေ… ဟုတ်တယ်နော်… စွယ်တော်လဲပန်းတပွင့်မို့ပန်းအလှတော့ရှိတာပေါ့…
အပူအပင်ကင်းတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ရွှေရောင်နေ့ ရက်တွေပေါ့ KK SNH ရေ…
သက်ဝေရေ…အားပေးတာ အားတွေရှိသွားတယ်… ပြည်Short Trip လေးအကြောင်းမျှော်နေမယ်နော်…
မလွမ်းဘယ်သူရှိမလဲ စကားပန်းရေ… ခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးပါ… နောင်လဲလာလည်နော်…
Anonymousရေ… ဟုတ်တယ်… နောက်ပိ်ုင်းကလေးတွေ အရမ်းလှလာကြတာ…
အေးငြိမ်းဝေရေ… အင်း…ဒီအကြောင်းသက်သက်ကြောင့်တော့ နူးညံ့တာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်… ကျောင်းကိုခွဲရမှာစိုးလို့ …သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခွဲရမှာစိုးလို့ ဆို ပိုမှန်မလားပဲ… ခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးပါ… နောင်လဲလာလည်နော်…
ကျေးဇူးပါဇနိရေ… စီနီယာ၊ဂျူနီယာ အမျိုးတွေပေါ့… နောင်လဲလာလည်နော်…
ဟုတ်ပါတယ်ဂျစ်ရေ… အင်ဂျင်နီယာဆိုမှ same categoryပေါ့နော်…
ကျော့ရေ… သဇင်က သဘောကောင်းတဲ့ မမဌေးကို သဇင်သူတွေတိုင်း လွမ်းကြမှာပါ… ကျောင်းကြီးကတော့ အမြဲအိပ်မက်ထဲမှာ… နောင်လဲလာနော်… ညီမblog urlကဘာလဲဟင်… profile accessလုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်…
နုရေ… မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူက ရန်ကုန်အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်… ပြန်မှာပြီးတင်ကြည့်ပေးမယ်နော်…
ကိုပေါရေ… ကျွန်မတို့ ကျောင်းကြီးက တကယ့်ကို လှတာပါ… ကျောင်းကြီးကို သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ ဆရာ ကျောင်းနဲ့ ခွဲနေရတာ တွေးမိတိုင်း ငိုချင်တယ်…
ကောင်းကင်ကိုရေ…တဣသိုလ်အရသာတွေ ပေါ့ပျက်သွားတဲ့အခါ ပျော်စရာဆိုတာ ခပ်ပါးပါးပါပဲ…
အိမ့်ရေ… ပထမနှစ်ကတော့ ဒူးတုန်တုန်နဲ့ ပေါ့… နောက်တော့လဲ ကျင့်သားရသွားရော…
တို့ လဲ ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ မိသားစုနဲ့ ကန်သာယာ(သို့ ) အောင်သိပ္ပံမှာ သွားသွားစားတယ်
…မေတို့ ဖေတို့ က တို့ ဒီထွက်လာတဲ့အထိ သွားတုန်း… သူတို့ ပါကျောင်းကိုချစ်သွားကြတာလေ…
သက်ဝေရေ… လူရင်းကြီးတွေမို့ ကျေးဇူးမတင်ကြေးလေ….
နောင်လေးရေ… ဟုတ်ပါတယ်… တအူတုန်ဆင်း ညီအကိုမောင်နှမ အရင်းတွေပါပဲ…
Anonymousရေ…RITက တို့ အားလုံးနှလုံးသားမှာအမြဲရှင်သန်နေမှာပါ…
မောင်မျိုးရေ… စာမေးပွဲဖြေရတာကလွဲရင် တသက်လုံးကျောင်းတက်နေချင်လောက်အောင် ကျောင်းသားဘ၀က ပျော်စရာကောင်းပါတယ်…
JulyDreamရေ…အလွမ်းတွေထပ်တူကျတယ်… ခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးပါ… နောင်လဲလာလည်နော်…
မြတ်နိုးရေ… ဘယ်တော့မှမသေဆုံးတဲ့ တို့ ကျောင်းကြီးနဲ့ တို့ ကြားက သံယောဇဉ်တွေပေါ့…
ဒီဘက်ကို မရောက်ဖြစ်တာ လေးငါးရက်ရှိတဲ့အကျိုး၊ အခုတော့ စာကောင်းတပုဒ်ကို နောက်ကျမှ ဖတ်ရပြီ။ တခါတလေကျတော့လဲ ဘလော့ဂ်တွေလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဟိုကနေဒီရောက်၊ ဒီကနေ ဟိုရောက်နဲ့ ကိုယ်ဖတ်နေကြ ဘလော့ဂ်ဆီကို တော်တော်နဲ့ မရောက်နိုင်တော့ဘူး တန်ခူးရေ…။
ကျနော် မေမေက လုပ်သားကောလိပ်ကျောင်းသူ…။ ညနေခင်းဆိုရင် အဲဒီကောလိပ်ကို သွားသွားတက်တော့ တခါတလေကျရင် သူတို့ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းတွေ အိမ်ကိုပါလာတတ်တယ်။ စာဖတ်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ ကျနော်က အဲဒီမဂ္ဂဇင်းတွေကို အမြဲလိုလို ယူယူဖတ်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်မတက်ဖူးပေမယ့် အဲဒီကောလိပ်ကျောင်းကို တကယ်ပဲ သွားတက်နေရသလိုလို ခံစားတတ်လာတယ်။ အခုလဲ တန်ခူးစာကို ဖတ်ရတာ အဲဒီလို မဂ္ဂဇင်းထဲက စာတပုဒ်ကို ဖတ်ရသလိုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်သွားတက်ခွင့် မကြုံခဲ့ရပေမယ့် စာဖတ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ ကျနော်လဲ အာအိုင်တီကျောင်းသား ခဏဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်မရဲ့ gmail accountနဲ့အမဆီမှာcommentဝင်ရေးတာပါ။
မတန်ခူးရေ ရေးတက်လိုက်တာ ဘယ်Tutionတက်ထားလဲမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်post အသစ် တွေစောင့်ဖတ်လိုက်ရတာအမောပါပဲ။
ကျောင်းကြီးကို သတိရတယ်.ကန်သာယာမှာ ထမင်းစာချင်တယ်။ ကျောင်းအကြောင်း အလွမ်းပြေ ဆက်ရေးပါအုံးမမရေ။ အားပေးနေတယ်။ ဒါနဲ့ မမ ပို့လေး မမဘလော့နာမည် မပါပဲနဲ့ ကျတော်တို့ကြားထဲမှာ တော်တော်လေးပျံနေတယ်ဗျာ။ pdf file အနေနဲ့ပေါ. အနည်းဆုံးတော့ ဖန်တီးသူနာမည်လေးပါသင်တယ်လို့ကျတော်ထင်တယ်
ကိုစေးထူးရေ… အားတက်စေတဲ့commentလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ…
ကျော့ရေ… ညီမအိမ်လေးပြီးသွားရင် လက်တို့ လိုက်နော်… လာလည်လွန်းလို့ချောင်းပေါက်နေမှာ…
ကျေးဇူးပါ bsfရေ… ကျွန်မpostအသစ်တွေ စောင့်ဖတ်တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ကျေးဇူးနှစ်ထပ်ပါ… နောင်လဲ အမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ကျေးဇူးပါ ပုလုကွေးရေ…ကျွန်မက ကျောင်းကို အလွန်အကျွံ သံယောဇဉ်ကြီးတတ်သူဆိုတော့ ကျောင်းအကြောင်းတွေ အလျင်းသင့်သလို ရေးဖြစ်နေဦးမှာပါ… ကျွန်မpostလေးကို ဖြန့် ဝေပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… အလွမ်းပြေပေါ့လေ… နောင်လဲ အမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
I like your post, RIT Student. Really good post and can describe the RIT girls' lives clearly.I miss my school time after reading ur post cos I also Engineering Student from MIT. So let me describe ur post in our forum of www.chintwin.com with credit of your blog address. I hope you will give permit to copy of you post.
Thanksalot for your post and kindness.
ကျော်ကျော်ရေ… RIT,YIT,MIT,YTU,……..xxxTU အားလုံး အမျိုးတွေပေါ့နော်… ဒီpostလေးကတဆင့် အင်ဂျင်နီယာ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ခင်ခွင့်ရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်… ကျွန်မpostနဲ့ blog addressကို chintwinမှာသုံးပါ… ကျွန်မကိုယ်တိုင် အညာသူတယောက်မို့အညာသူအညာသားတို့ဆုံဆည်းရာ ချင်းတွင်းမှာ ပတ်သက်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးပါ… အခွင့်သာရင် ချင်းတွင်းကို လာခဲ့ပါမယ်… နောင်လဲ ကျွန်မဆီ လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်….
One of my friend share it from SG.
Let me memories back our student life clearly.
Looking forward to see your next good one.
ခုလိုအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ SZMရေ…
ကျောင်းကိုတောင် အတော်လေး ပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ အမက စာရေးတော်ကောင်းတာပဲ။
ကျွန်တော်လည်း R.I.T (Y.I.T) ကပါ။ 95 batch ပါ။ ကျွန်တော်တို့အပြီး နောက် ၂ နှစ်လည်းကြရော ကျောင်းတော်ကြီးလည်း ပျက်စီးတာပါပဲ။
first year တုန်းကပေါ့။ ရှေ့ဆုံး တန်းလုရကနေ တစ်ခါတော့ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ ကဲကွာ ဆိုပြီး ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ ပေကပ်ကပ်နဲ့ မိန်းမတွေကြား ခတ်တည်တည်ပဲ ထိုင်နေလိုက်တယ်။ သူတို့က မရှက်ဘူးလား တဲ့ အနောက်တန်းပြောင်းတဲ့။ ဘယ်ရမလည်း ရှက်ဘူးလို့ နင့်ဘာနင်ထိုင် ငါလည်းငါ့ဘာငါ ပဲလို့။ ပြီးရော :D
အမကို ဒီ RIT ကျောင်းသူနဲ့ စပြီးသိပါတယ်။
ခံစားချက်ခြင်း တူတာများလို့ အမနဲ့အတန်းသိပ်မကွာဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။
အမှတ်တရ ပုံ၇ိပ်များကို ဖတ်၇တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အစ်မေ၇းထားတာကို ဖတ်ပြီး ကျောင်းသား ဘ၀ကို ပြန်အမှတ်၇လို. လွမ်းမိပါတယ်.... အစ်မ၇ဲ. စာ အေ၇းအသား ကောင်းတယ် သိလား....
၇န်ကုန်မှာ ရှိတုန်းကတော. ကျောင်းပြီးသွားပေ မယ်.လည်း ပိတ်၇က်တွေနဲ. အားတဲ. အချိန်တွေဆို သူငယ်ချင်းတွေ ချိန်းပြီး နွေးအေးမှာ ဆုံဖြစ်ကြတယ်.... ခုတော. .....
ဆဌမ နှစ်ကနေ ပထမနှစ် ကို ပြောင်းပြန် အောက်ကနေ အပေါ် ဖတ်သွားလိုက်တာ ပိုတောင်းဖတ်လို့ ကောင်းနေသလိုပဲ....
မာလိုလို ဘိုလိုလို စီးကရက် အစ...
ရွှေနှင်းဆီ နဲ့ ဂျိုးသိန်း အလယ်...
လပ်ကီးစထရိုက် မွန်ထရီနဲ့ အဆုံး...
စိုးမြင့်ကြော် တလှည့် ခေါက်ဆွဲကြွပ်ကြော် တလှည့်....
ပဲထမင်းနဲ့ ကြက်ဥကြော်လည်း သတိရလွန်းလို့ အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြော်စားတာ မမှီသေး...
တစ်ပွဲ တစ်ရာ ကြိုက်ရာဟင်းနဲ့ ထမင်းစားဆောင် ထဲမှာလည်း စားကောင်းခဲ့တာပဲ....
ထမင်းပန်းကန်ထဲ ဟင်းရေ(ကျောင်း ရောက်ခါစက ပန်ကန်ဆေး ရေဟုပင် ထင်မိ) လောင်းထဲ့ပြီး အသားဟင်းနုတ်နုတ်စင်း ကိုလည်း တပ်မက်မှု မပါသော နည်းနဲ့ စားခဲ့သေးတာပဲ...
ကုတင်သေးသေးလေးမှာ (၃)ယောက် အိပ်ခဲ့တာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ဆိုတာ ခုတော့ စဉ်းစား စရာပေါ့...
ဘတ်စကား တွယ်စီး အပြီး လိုရာရောက်တော့ အောင်နိုင်စွာသော အပြုံးမျိုး ကို ပြုံးလိုက်ချင်ပါသေးသည်လေ...